Maxay Shirkaddaadu u Hirgelin weyday CMS? | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 17, 2009 Sabtida, Oktoobar 24, 2020 Douglas Karr
Waxaa jira doodo badan oo ku saabsan balooggan ku saabsan wax-u-hagaajinta, is-hagaajinta beddelaadda, suuq-geynta gudaha, habeynta mashiinka raadinta… xitaa tijaabinta noocyo kala duwan iyo soo dejinta bogga hagaajinta. Mararka qaar waxaan ilaawnaa in boggag badan ay wali ku jiraan 1990-yadii oo ay yihiin bogag HTML-adag oo si adag loo calaamadeeyay oo aan waxba iska beddelin server!
Waxaan ku soo galay FTP, waan soo dejiyay feylka waxaanan sameeyay tifaftirka lagama maarmaanka ah iyada oo loo marayo Dreamweaver. Kadib waxaan usheegay iyaga in shaqadan oo dhan runti aan loo baahnayn. Qof kale oo macaamiil ah ayaa dhowaan u diray suuqooda tababarka HTML si ay ugu cusbooneysiiyaan boggooda. Tani sidoo kale waxay ahayd mid aan loo baahnayn. In kasta oo aqoonta teknolojiyada websaydhku waxtar leedahay, haddana nidaamka maaraynta maaddooyinka wanaagsan ayaa shirkaddaada ku siin kara dhammaan aaladaha loo baahan yahay si maalin walba loo cusbooneysiiyo bartaada iyadoo laga saarayo caqabadaha waxbarashada iyo farsamada.
Qiimaha fasalada ama lacagaha socda ee ninka webka, Shirkadahani waxay hirgelin lahaayeen nidaam maareyn maareyn oo adag oo ay maamuli karaan.
Mid ka mid ah macaamiisha noocaas ah, Paper-Lite, a bixiyaha nidaamka maareynta dukumintiyada, waxaan isticmaalnay WordPress. Waxaa jira tiro kale oo xalal maarayn maareyn ah oo awood u leh suuqa, laakiin kani wuxuu lahaa dhammaan dawannada iyo foorida oo wuxuu si fudud ula qabsan karaa shuruudaha macaamiisha.
Ku dhowaad diiwaan-haye kasta ayaa hadda bixiya nidaamkooda maareynta maaddada ama wuxuu si otomaatig ah u rakibaa nidaamyada kale ee maareynta maareynta. Taladayda kaliya waxay noqon laheyd inaan ku ekaado barxad leh korsasho balaaran iyo bulsho weyn oo horumar leh.
Maskaxda ku hay in rakibidda CMS bilaash ah aysan bilaash ahayn, in kastoo. Dayactirka dayactirka waa waajib! Ahaanshaha wiilka weyn ee bilaashka ah 'CMS block' sidoo kale waxay isku dhiibtaa dambiilayaal badan oo isku dayaya jabsiga aad madal. CMS bilaash ah oo lagu martigeliyey madal martigelin raqiis ah sidoo kale uma adkeysan doonto tan taraafikada - adiga ayaa kaa doonaya xooji kaabayaashaada.
Faa'iidooyinka ayaa ka culus halista haddii aad leedahay nin gacan-ku-wanaagsan ah oo ilaaliya CMS-gaaga caafimaad, in kastoo. Waxa weheliya rakibidda iyo habaynta CMS-ga:
Waxaan sameynay xoogaa gadaal ah ku habboonaanta makiinadaha raadinta iyada oo la adeegsanayo qalabka saxda ah iyo qaabeynta mawduuca.
We loo habeeyay bogga galitaanka si ay macaamiishoodu u awoodaan soo gal oo arag waxyaabaha kooban.
Waxaan u qaabeynay oo aan qaabeynay a xigasho plugin si aad u rogto xigashooyinka macaamiisha bogga guriga hoostiisa.
Waxaan iibsanay oo rakibnay a xalka qaab adag si ay u qabsadaan horseedka suuq geynta.
Waxaan cusbooneysiinay faylka htaccess si aan ugu wareejino xiriiriyeyaashii hore dariiqyo cusub oo isla nuxurka ah. Waxaan sidoo kale rakibnay a dib u habeynta plugin si ay ula tacaalaan shuruudaha gudbinta dheeraadka ah. Tani badanaa waa tallaabo la iska indhatiray by naqshadeeyayaasha shabakadda waxayna dili karaan wax-u-hagaajintaada. Hubso in xiriiriyeyaashaadii hore ay wali shaqeeyaan… kaliya u tilmaan tusmada cusub!
Waxaan rakibnay mowduucyo iyo waxyaabo dheeri ah si markaa goobta ay wax u qabanayso iPhone, iPod taabashada iyo aaladaha kale ee mobilada. Dadku waxay u adeegsanayaan aaladaha mobilada si ay marba mar uga baaraandegaan… boggaaga ma laga akhrisan karaa qalabkan?
Waanu habaynay xayawaanka qaybaha bogga oo leh marin habeyn qoto dheer si macaamiisha ay ugu sahlanaadaan.
Dabcan, waxaan qaabeynay Webmasters, Stats plugins, iyo Analytics sidoo kale si shirkadu ula socoto kormeerkeeda.
Waxaa laga yaabaa inay ugu muhiimsan tahay, waxaan sii wadeynaa inaan ka caawinno shirkadda inay la qabsato barmaamijka cusub ugana faa'iideysato si wax ku ool ah A CMS sida WordPress wuxuu noqon karaa xoogaa cabsi marka hore. Waxaan kuu xaqiijin karaa inay aad uga fudud tahay sharraxaadda FTP iyo HTML, in kastoo!
Ugu dambeyntiina, in kasta oo WordPress uu yahay barxad u qalmid wax lagu qoro, haddana waxaan si daacad ah u aaminsanahay inay tahay nidaam ka fiican maareynta maareynta mareegaha. Waxaa jira software sida xalka adeegga sida Suuqa kuwaas oo bixiya maareynta goobta, qorista, iyo xitaa ecommerce.
Tags: sentimitirMaareynta Maareyntanidaamka maamulka contentContent Suuq
Oktoobar 21, 2009 at 12:42 AM
Si fiican ayaa loo yidhi, Doug.
In kasta oo aan waayo-aragnimo la mid ah la yeeshay dad badan oo milkiileyaal ganacsi u samaynaya sidii lagu sameeyay qarnigii la soo dhaafay, tani sidoo kale waa run:
"CMS-ka sida WordPress wuxuu noqon karaa xoogaa cabsi marka hore."
Milkiilayaasha ganacsiyada yaryar, gaar ahaan, waxay ka helaan CMS shaqo aad u tiro badan. Waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay in la xasuusto haddii aad ku mashquulsan tahay socodsiinta meheraddaada oo aad soo dhigto wax cusub kolba mar. Waqtiga aad ugu dhowaaneyso inaad mar labaad isticmaasho CMS-ga, waad ilaawday sida loo sameeyo. Oo yaa doonaya inuu akhriyo buug gacmeed?
WordPress dhab ahaantii aad ayuu uga fiican yahay Joomla ama Drupal marka la eego isticmaalka guud ee maamulka. Qulqulka shaqadu waa mid dareen badan marka loo eego labada kale.
Muxuu ahaa khibradaada CMS-yada ee milkiileyaasha ganacsiyada yaryar? Ma isku dayday waxyaabo "ka fudud"?